အချစ်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက အလှဆုံးပဲဆိုတာကို ချမ်းချမ်းရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ တင်စားပြီးပြောလာတဲ့ အေးမြတ်သူ – Askstyle
အချစ်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက အလှဆုံးပဲဆိုတာကို ချမ်းချမ်းရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ တင်စားပြီးပြောလာတဲ့ အေးမြတ်သူ
ပါးခ်ိဳင့္လွလွေလးနဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး ေအးျမတ္သူကေတာ့ ငယ္ရြယ္စဥ္အခ်ိန္က ခပ္ေဂၚေဂၚေနတတ္ျပီး အလန္းစားေနခဲ့ေပမယ့္ အသက္အရြယ္တစ္ခုေရာက္ရိွလာခ်ိန္မွာေတာ့ အရမ္းကို တည္ျငိမ္သြားခဲ့ျပီး အလုပ္ေတြကို ပိုမိုၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္လာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအးျမတ္သူက လက္ရိွ ကိုဗစ္ကာလမွာလည္း အလွဴအတန္းေတြမ်ားစြာျပဳလုပ္ေနသလို ပရိသတ္ေတြနဲ့လည္း အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္သြားျခင္းမရိွေအာင္ ၾကိဳးစားေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေအးျမတ္သူက အနုပညာလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ လူနည္းစုနဲ့ လုပ္ကိုင္ရတဲ့ ေၾကာ္ျငာနဲ့ ပြဲတက္ေလးေတြကိုေတာ့ လက္ခံရိုက္ကူးတက္ေရာက္ျဖစ္ေနတာကို ေတြ့ရပါတယ္။
မေန့က ဇန္နဝါရီလ (၂) ရက္ေန့မွာေတာ့ ေအးျမတ္သူက ဆိုင္ဖြင့္ပြဲတစ္ခုကို တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အနုပညာညီအစ္မေတြနဲ့ ဆံုေတြ့ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအးျမတ္သူကေတာ့ ကိုယ္ဝန္လြယ္ေဆာင္ထားတဲ့ အဆိုေတာ္ ခ်မ္းခ်မ္းနဲ့လည္း ေတြ့ဆံုခဲ့ျပီး အမွတ္တရဓာတ္ပံုေလးရိုက္ကူးကာ “..မေန႔ က ျမန္မာပလာဇာ မွာ SHAYI. .ဆိုင္ဖြင့္ပြဲက ပုံေတြမွာ ဒီပုံေလး ကို ခ်စ္လို႔….. အခ်စ္ခံရတဲ့အမ်ိးသမီးေတြ ရဲ႕ အလွဆုံးအခ်ိန္.. ဗိုက္ထဲ ကလည္း အမ်ိဳးသမီးေလးတဲ့ …” ဆိုျပီး အခ်စ္ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေလးေတြက အလွဆံုးဆိုတာကို ေျပာလာပါတယ္။
ေအးျမတ္သူကေတာ့ ဒုတိယေျမာက္ကိုယ္ဝန္ကို လြယ္ေဆာင္ထားရတဲ့ ခ်မ္းခ်မ္းကိုၾကည့္ျပီး သေဘာက်အသည္းယားေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအးျမတ္သူတစ္ေယာက္လည္း ခ်စ္သူနဲ့ အျမန္ဆံုးေရႊလက္တြဲျပီး သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝေလးကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါေစေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
ပါးချိုင့်လှလှလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မင်းသမီးချောလေး အေးမြတ်သူကတော့ ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်က ခပ်ဂေါ်ဂေါ်နေတတ်ပြီး အလန်းစားနေခဲ့ပေမယ့် အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ အရမ်းကို တည်ငြိမ်သွားခဲ့ပြီး အလုပ်တွေကို ပိုမိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အေးမြတ်သူက လက်ရှိ ကိုဗစ်ကာလမှာလည်း အလှူအတန်းတွေများစွာပြုလုပ်နေသလို ပရိသတ်တွေနဲ့လည်း အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခြင်းမရှိအောင် ကြိုးစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အေးမြတ်သူက အနုပညာလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် လူနည်းစုနဲ့ လုပ်ကိုင်ရတဲ့ ကြော်ငြာနဲ့ ပွဲတက်လေးတွေကိုတော့ လက်ခံရိုက်ကူးတက်ရောက်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မနေ့က ဇန်နဝါရီလ (၂) ရက်နေ့မှာတော့ အေးမြတ်သူက ဆိုင်ဖွင့်ပွဲတစ်ခုကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အနုပညာညီအစ်မတွေနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အေးမြတ်သူကတော့ ကိုယ်ဝန်လွယ်ဆောင်ထားတဲ့ အဆိုတော် ချမ်းချမ်းနဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးရိုက်ကူးကာ “..မနေ့ က မြန်မာပလာဇာ မှာ SHAYI. .ဆိုင်ဖွင့်ပွဲက ပုံတွေမှာ ဒီပုံလေး ကို ချစ်လို့….. အချစ်ခံရတဲ့အမျိးသမီးတွေ ရဲ့ အလှဆုံးအချိန်.. ဗိုက်ထဲ ကလည်း အမျိုးသမီးလေးတဲ့ …” ဆိုပြီး အချစ်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေက အလှဆုံးဆိုတာကို ပြောလာပါတယ်။
အေးမြတ်သူကတော့ ဒုတိယမြောက်ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ဆောင်ထားရတဲ့ ချမ်းချမ်းကိုကြည့်ပြီး သဘောကျအသည်းယားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အေးမြတ်သူတစ်ယောက်လည်း ချစ်သူနဲ့ အမြန်ဆုံးရွှေလက်တွဲပြီး သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။